रोचक प्रसङ्ग Archives - NewsPolar NewsPolar
पानीमा तैरने सहर बन्दै, जसमा १२ हजार मानिस रहनसक्ने
एजेन्सी । दक्षिण कोरियाको बुसान सहरमा पानीमा तैरने सहर बन्ने भएको छ । तपाईलाई यो कुरा पत्यार नलाग्न सक्छ तर यो एकदम सत्य हो । यो सहर कुनै आश्चर्य भन्दा कम हुनेछैन । विश्वको पहिलो तैरने सहरको प्रोटोटाइप भइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको सहयोगमा वैज्ञानिकहरुले यसको तयारी गरिरहेका छन्
यो हो संसारको सबैभन्दा खतरनाक ताल, जसको सम्पर्कमा आएका प्राणी…
यो खतरनाक र सुन्दर तालको नाम लेक नेट्रोन हो जुन तान्जानियामा अवस्थित छ । आरुषा क्षेत्रको उत्तरी न्गोरंगोरो जिल्लामा अवस्थित
लण्डन । भनिन्छ प्रेममा कुनै उमेर हुँदैन । यस्तै एउटा घटना बेलायतमा भएको छ, जहाँ ९५ वर्षको उमेरमा एक वृद्ध
यो हो संसारकै महँगो आँप !
संसारमा आँपका धेरै प्रजाति छन् । आँपलाई राजकीय फलको दर्जा पनि दिइन्छ । विश्वका विभिन्न देशका आँपको पनि आ–आफ्नै विशेषता
महिलाको अनौठो सोख, घरमै राखिन् ४०० विषालु माकुरा
लण्डन । एक बेलायती महिलाले आफ्नो घरमा ४०० वटा माकुरा राखेकी छिन्, तीमध्ये धेरै अत्यन्तै विषालु र खतरनाक छन् ।
अन्टार्कटिकामा अस्तायो सूर्य, अब चार महिनापछि मात्र बिहान हुने
कल्पना गर्नुहोस् त रात केही घण्टाको सट्टा चार महिना लामो हुँदैछ र केही समयपछि अन्धकारमा बाँच्न गाह्रो हुनेछ। तर अन्टार्कटिकाको
बालेनको नाममा खसी बाजी !
काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका बालेन शाहको नाममा दुई युवाले २८ केजीको खसी बाजी राखेका छन् ।
अमेरिकाको आकाशमा देखियो एलियनको जहाज !
यो संसारभर हरेक दिन एलियन र यूएफओ देखिने दावी गरिएको छ । ब्रह्माण्डमा एलियनहरू छन् कि छैनन् ? वैज्ञानिकहरू वर्षौंदेखि
अर्बपति मात्रै बस्ने यो टापुः आलिशान घरको मूल्य थाहा पाउँदा…
संसारमा धेरै अनौठा ठाउँहरू छन् जसको बारेमा कमैलाई थाहा छ । आज हामी तपाईलाई नाइजेरियामा रहेको एउटा यस्तो ठाउँको बारेमा
युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले लगाएको ज्याकेटको मुल्य एक करोडभन्दा बढी
युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदोमिर जेलेन्स्कीले लगाएको फ्लिसको ज्याकेट एक सय एघार हजार अमेरिकी डलर (एक करोड ३७ लाख २० हजार रूपैयाँ)